Ikhamera Yomzimba Ogugile kungenzeka ukuthi ayisona Isinqumo Sokugcina - Izixazululo ze-OMG
Ngoba amakhamera omzimba aqopha ngejubane eliphakeme kakhulu kunesitolo esivamile esivumayo noma amakhamera okuphepha okuqondisa izigwegwe, mancane amathuba okuthi imininingwane ebalulekile izolahleka ezikhaleni ezingama-millisecond phakathi kozimele, njengoba kwesinye isikhathi kwenzeka kulawo madivayisi we-cruder. Abantu abangaqondi inqubo yokuphendula ngeke bayibeke lapho bebuka izithombe. Bazocabanga ukuthi isikhulu sihambisana nejubane lesenzo njengoba ikhamera ikurekhoda. Ngakho-ke, ngaphandle kokufaka okunolwazi, akunakwenzeka ukuthi baqonde ukuthi isikhulu singagcina kanjani singahlosile ukufaka imizuliswano ngemuva komsolwa noma ukudubula okwengeziwe ngemuva kokuthi usongo seluphelile.
Ukuthi ikhamera ithwebula kangaki kuncike kakhulu lapho ibekwe khona nalapho isenzo senzeka khona. Ngokuya ngendawo nendawo engela kuyo, isithombe singavinjelwa izitho zomzimba wakho, kusukela ekhaleni lakho kuye ezandleni zakho. Amakhamera awakwazi ukuthatha umbono we-360degree wesimo esingahle senzeke. Le nto ayinakusinika isithombe sangempela sesehlakalo. Uma udubula isibhamu noma i-Taser, ngokwesibonelo, ikhamera esifubeni sakho kungenzeka ingarekhodi okuningi kunezingalo nezandla zakho ezeluliwe. Noma ukumane ubeke umbono wakho kungasitha umbono wekhamera. Izikhathi ezibucayi ngaphakathi kwesimo ongasibona mhlawumbe siphuthelwe ngokuphelele ngumzimba womzimba womuntu ngenxa yalezi zinto eziguqukayo, ekugcineni ukufihla lokho umbuyekezi angadinga ukukubona ukwenza ukwahlulela okulungile.
Ukubuka okuphelele kwe-6725 Ukubuka kwe-2 Namuhla